Iran: Nitarika Fisamborana Ny Ady Fifampitorahan-drano Tany Teheran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2011 4:02 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, 한국어, русский, বাংলা, عربي, Español, Ελληνικά, srpski, Italiano, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Ny rehetra dia mahafantatra fa tsy tokony hilalao afo. Any Teheran, dia toa, na ny milalao rano aza dia mety hiteraka olana. Farafaharatsiny dia ‘lesona’ azon'ireo tanora Iraniana izany rehefa nosamborin'ireo mpitandro filamianana izy ireo ny herinandro lasa teo noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamina lalaon'ny ady fifampitorahan-drano teny amin'ny arabe. Nanana ny anjara toerany tokoa ny Facebook [fa] tamin'ny fitondrana vahoaka an-jatony vitsivitsy ho amin'ilay ady.
Araka ny Masoivohom-baovao Kristiana Iraniana:
[Ny lehiben'ny mpitandro filaminana any Teheran Sajedinia] dia nampitandrina “Hopotehanay izay hetsiky ny tanora mitady handika ny lalànantsika” manondro mazava loatra ireo hafatra an-tsoratra sy tamin'ny aterineto avy amin'ireo tanora miantso ny hafa ho amin'ireo lalao mahatsikaiky sy iarahan'ny lahy sy vavy eny amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe ao Teheran. Omaly, maro ireo media mpitahiry ny nentin-drazana any Iran no nanohitra ny ady fifampitorahan-drano izay nahitàna ireo vehivavy lena fitafiana sy nanàla sarona.
Maro ireo mpitoraka bilaogy no naneho tamin-katezerana sy eso ny fihetseham-pony tamin'ity vaovao ity
Manoratra [fa] i Nedaye Sabz:
Aty amin'ity firenena ity raha miady mampiasa ny rano ianao, voasambotra, nefa raha manolana sy mamono olona ianao, tsy voasambotra akory, fa mbola mahazo mari-pankasitrahana noho ny herim-po aza.
Manoratra [fa] i Fetnegar:
Toa mitady antony hisamborana ny tanorantsika izy ireo [mpitandro filaminana]… Afaka hampivelatra na mety hamelona indray ny Hetsika Maitso ity ady fifampitorahan-drano ity.
Miteny [fa] i Derafshe Kaviani:
Iran dia firenena iray, izay raha any ianao no milalao basy rano , voampanga ho manakorontana ny filaminam-bahoaka, nefa raha maka Kalashnikov iray ianao ka mitifitra zazavavy iray, raisina ho toy ny miaramilan'ny Imam Miafina.
Manoratra [fa] i Get Honest Third Eye:
Lasa fahazarana ny mampifandraika ny zava-mitranga ato anatin'ity firenena ity amin'ny politika… ny media sasany miresaka momba ny ady fifampitorahan-drano tahaka ny hoe misy olona an-jatony manao fihetsiketsehana… Tsy manontany aho hoe maninona ny olona no mankafy ny ady fifampitorahan-drano. Manontany aho hoe maninona no avaditsika ho politika ity hetsika ity?
Mampahatsiahy antsika ny mpitoraka bilaogy fa misy ireo gadra politika izay maka risika ary manao fitokonana tsy mihinan-kanina, nefa voasaron'ny hetsiky ny ady fifampitorahan-drano ny vaovao mahakasika azy ireo.